ကြည့်လိုက်တာနဲ့ Fangirl လုံးလုံး ဖြစ်သွားစေမယ့် တရုတ် Bromance ဇာတ်လမ်းတွဲများ | News Bar Myanmar
ကြည့်လိုက်တာနဲ့ Fangirl လုံးလုံး ဖြစ်သွားစေမယ့် တရုတ် Bromance ဇာတ်လမ်းတွဲများ
Romance Drama ပဲ ကြည့်ကြမှာလား? Bromance လေးတွေလည်း ကြည့်ကြည့် ကြပါအုံးနော်။ အချို့ Romance drama တွေထက်တောင်ပိုပြီး သင့်ကို စိတ်လှုပ်ရှား ရှင်ခုန်စေမယ့် Bromance drama တစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ဒီဖော်ပြထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲက အချို့ကတော့ BL ဇာတ်ကြောင်းလေးတွေပါတဲ့ ဝတ္ထုတွေကနေ အခြေခံရိုက်ထားတာပါ။ သို့သော်လည်း တရုတ်အစိုးရရဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ ဆင်ဆာစည်းမျဉ်းများကြောင့် ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက ဇာတ်ကောင်တွေကို Bromance အဖြစ် ဖန်တီးပေးလိုက်ရပါတယ်။
1. The Untamed (2019)
The Untamed ကတော့ ၂၀၁၉ ကို ဟုန်းဟုန်းတောက်စေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုလို့ ပြောရင်တောင် ပိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ သိုင်းလောကသားလေး နှစ်ယောက်ရဲ့ အပူပန်ကင်းတဲ့ ငယ်ဘဝမှ မယုံနိုင်စရာ ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေကြောင့် ရင်နာဝမ်းနည်းစရာ အဖြစ်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်တွေရဲ့ နောက်ခံ အကြောင်းအရာနဲ့ တရားခံအစစ်ကို ရှာဖွေခဲ့ကြတဲ့ သိုင်းလောကသားလေး နှစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းကို ပုံဖော်ထားတာပါ။ အပိုင်း ၅၀ နဲ့ ပုံဖော်ထားတဲ့ The Untamed ဟာ ဇာတ်ကောင်ရွေးချယ်မှု၊ သရုပ်ဆောင်ပိုင်း၊ အဝတ်အစား၊ ဇာတ်ဝင်တေး စတာတွေကို ပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ Untamed ဟာ ပရိသတ်အကြိုက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ၂၀၁၉ ရဲ့ လူကြည့်အများဆုံး စီးရီးတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ မှာ ငွေကြေးအဝင်ဆုံး ဇာတ်လမ်းလို့ ပြောကြပါတယ်။ အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Xiao Zhan နဲ့ Wang Yi Bo တို့အတွက်ကတော့ ၂၀၁၉ က သူတို့နှစ်လို့ ပြောရမလိုပါပဲ။
2. Gurdian ( 2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ပြသခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာလည်း BL ဝတ္ထုကို အခြေခံခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲပါပဲ။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ စုံထောက်တစ်ယောက်နဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ တစ်ယောက်တို့ရဲ့အကြောင်းကို ပုံဖော်ထားတာပါ။
Guardian ရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းကတော့ အနည်းငယ် ရှုပ်ထွေးနိုင်ပေမယ့် ရင်ထိစေမယ့် ဇာတ်ကွက်တွေ၊ ဟာသဇာတ်ကွက်လေးတွေကြောင့် ကြည့်ရှုသူတွေကိုဇာတ်လမ်းအဆုံးထိ ဆွဲခေါ်သွားမှာပါ။
3. Nirvana in Fire (2015)
ဒါကတော့ တရုတ် နန်းတွင်းဇာတ်လေးပါနော်။ နိုင်ငံရေး၊ ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ပွဲများ၊ တောင့်တင်းတဲ့ ဇာတ်အိမ်တွေနဲ့ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲလေးပါ။ ဒါ့အပြင် Bromance လည်း ပါသေးတယ်နော်။
တော်ဝင်မင်းသား Jing အတွက် ထီးနန်းရအောင် အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း Lin Shu Jing ဟာ ဘယ်လိုတွေ လျှို့ဝှက်စွာ ကူညီခဲ့လဲ ဆိုတာတွေလည်း မြင်တွေ့ရမှာပါ။ နန်းတွင်းဇာတ်လမ်းတွဲ တောင့်တနေသူတွေအတွက် ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲစာရင်းထဲ ထည့်ထားသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
4. S.C.I (2018)
ဒါကတော့ ၂၀၁၈ မှ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲပါ။ အထူးအမှုလိုက်အဖွဲ့က အဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်ရဲ့ မှုခင်းဖြေရှင်းပုံတွေကို ကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ်။
မှုခင်းဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်ချင်နေသူများ အကြိုက်တွေ့မယ် ထင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ဇာတ်လမ်းတွဲက ကြည့်ရှုကို အဆုံးထိ ဆွဲခေါ်သွားမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲပါပဲ။
Next မိန်းကလေးတွေ အပေါ် Gentlemen ဆန်စွာပြုမူလေ့ရှိတဲ့ GOT7 ရဲ့အပြုအမူများ »
Previous « ခေတ်အဆက်ဆက် ကိုရီးယား ဒရမ်မာတွေထဲက ကြွေချင်စရာ Second Lead မင်းသားများ အပိုင်း (၂)